ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တားဆီးနေတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ - Tameelay
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တားဆီးနေတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တားဆီးနေတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အဓိက အကြောင်းအရင်းတွေက ပြင်ပအခြေအနေတွေကြောင့်၊ ကံတရားမကောင်းမှုကြောင့်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားလို့၊ အချိန်၊ငွေ စီမံတဲ့အပိုင်းမှာ အားနည်းမှုရှိလို့ဆိုပြီး ပြောကြပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတလေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ရန်သူဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က အောင်မြင်မှုကို ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးရာကို ပို့နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအချက်တွေကြည့်သိနိုင်တာလဲ? ကြည့်ကြရအောင်
စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲလုပ်လုပ် ခေါင်းမမာပါနဲ့။ မိမိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ လိုအပ်တာတွေကို သယ်သွားရမှာဖြစ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား စွန့်လွှတ်ရမှာပါ။
မိမိရဲ့ နှလုံးသားကို နားထောင်ပြီး နှလုံးသားစေခိုင်းရာကို လုပ်ပါ။ အမှားတွေလုပ်တဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ အမှားတွေဆီကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ကို ခရီးဆက်ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သံသယဖြစ်တယ် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိရင် ဘာဘဲလုပ်လုပ် မအောင်မြင်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို သံသယဝင်နေရင် ယုံကြည်မှုမရှိရင် ဘယ်သူမှ ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိူ လမ်းညွှန်ပြပေးမယ့်သူကို ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ငြင်းပယ်ဖို့ ဝန်လေးနေတယ်၊ အလွန်အားနာတတ်တယ်မိမိကိုယ်ကို အထိခိုက်ခံပြီးတော့ သူတပါးကို ကူညီတယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဘာဘဲလုပ်လုပ် မိမိကိုယ်ကို အမြဲဦးစားပေးပါ။ အတ္တကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး၊မိမိကိုယ်ကို လေးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကူညီနိုင်ရင် ကူညီလိုက်ပါ၊ တကယ်မအားတဲ့အခါ မိမိမှာလဲ ပြဿနာတွေရှိတဲ့အခါ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းပါ။
ငြင်းတယ်ဆိုတာ အစပိုင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိလှပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ မိမိအလုပ်တွေအတွက် အချိန်ပိုပေးလာနိုင်တယ်၊ မိမိအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် ပို အာရုံစိုက်နိုင်လာတယ်စတဲ့ အကျိူးကျေးဇူးတွေကို ရရှိလာစေပါတယ်
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုကို ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျတားဆီးနတေဲ့ အခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ?
မအောငျမွငျရခွငျးရဲ့အဓိက အကွောငျးအရငျးတှကေ ပွငျပအခွအေနတှေကွေောငျ့၊ ကံတရားမကောငျးမှုကွောငျ့လို့ ဆိုကွပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြမှားသှားလို့၊ အခြိနျ၊ငှေ စီမံတဲ့အပိုငျးမှာ အားနညျးမှုရှိလို့ဆိုပွီး ပွောကွပွနျတယျ။
ဒါပမေယျ့ တခါတလမှော ကြှနျတျောတို့ဟာ ကြှနျတျောတို့အောငျမွငျမှုအတှကျ အကွီးမားဆုံးသော ရနျသူဖွဈနတေတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျက အောငျမွငျမှုကို ကြှနျတျောတို့နဲ့ဝေးရာကို ပို့နတေယျဆိုတာ ဘယျလိုအခကျြတှကွေညျ့သိနိုငျတာလဲ? ကွညျ့ကွရအောငျ
စီးပှားရေးလုပျတဲ့အခါဘဲဖွဈဖွဈ ဘာဘဲလုပျလုပျ ခေါငျးမမာပါနဲ့။ မိမိသှားနတေဲ့လမျးကွောငျးမှာ လိုအပျတာတှကေို သယျသှားရမှာဖွဈပွီး မလိုအပျတဲ့အရာတှကေို ပွတျပွတျသားသား စှနျ့လှတျရမှာပါ။
မိမိရဲ့ နှလုံးသားကို နားထောငျပွီး နှလုံးသားစခေိုငျးရာကို လုပျပါ။ အမှားတှလေုပျတဲ့အခါ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့။ အမှားတှဆေီကနေ သငျခနျးစာယူပွီး ရှကေို့ ခရီးဆကျပါ ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို သံသယဖွဈတယျ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုမရှိရငျ ဘာဘဲလုပျလုပျ မအောငျမွငျပါဘူး။ မိမိကိုယျကို သံသယဝငျနရေငျ ယုံကွညျမှုမရှိရငျ ဘယျသူမှ ကြှနျတျောတို့ကို ယုံကွညျကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ကိူ လမျးညှနျပွပေးမယျ့သူကို ရှာဖှဖေို့ လိုအပျပါတယျ
ငွငျးပယျဖို့ ဝနျလေးနတေယျ၊ အလှနျအားနာတတျတယျမိမိကိုယျကို အထိခိုကျခံပွီးတော့ သူတပါးကို ကူညီတယျဆိုတာ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ဘာဘဲလုပျလုပျ မိမိကိုယျကို အမွဲဦးစားပေးပါ။ အတ်တကွီးတာ မဟုတျပါဘူး၊မိမိကိုယျကို လေးစားခွငျးဖွဈပါတယျ။ ကူညီနိုငျရငျ ကူညီလိုကျပါ၊ တကယျမအားတဲ့အခါ မိမိမှာလဲ ပွဿနာတှရှေိတဲ့အခါ ပွတျပွတျသားသားငွငျးပါ။
ငွငျးတယျဆိုတာ အစပိုငျးမှာ သကျတောငျ့သကျသာ မရှိလှပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ မိမိအလုပျတှအေတှကျ အခြိနျပိုပေးလာနိုငျတယျ၊ မိမိအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ အရာတှအေတှကျ ပို အာရုံစိုကျနိုငျလာတယျစတဲ့ အကြိူးကြေးဇူးတှကေို ရရှိလာစပေါတယျ
ဗိုလ်ချုပ်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင့်ဘက်တန်
”ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျာ့။ ကျွန်တော်တို့ဖဆပလအဖွဲ့ကြီး မြေပေါ်ရောက်စအချိန်၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ပြန်အုပ်ချုပ်ချိန် ပေါ့ဗျာ။ ဖဆပလနဲ့ ကက်ဘိနက်အစိုးရနောင်ဂျိန်ချနေ တုန်းဆိုပါတော့။ အဲဒီအချိန်မှာ အိန္ဒိယ ဘုရင်ခံချုပ် လော့ဒ်လူဝီမောင့်ဘက်တန် မြန်မာပြည်ကို လာတယ်ဗျာ။ ဒီတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ မဟာမိတ်တပ်သားတွေစုပြီးဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ‘အိစ်အင်ဝက်စ်ကလပ်’က ကန်တော်မိတ် သဘင် (ယခုအိုရီယင့်ကလပ်) မှာဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတစ်ခုတည် ခင်းတယ်ခင်ဗျာ့။ ”အဲဒီညစာစားပွဲမှာ …
အရေးကြီး သတင်းလေးဖတ်မိလို့ မျှဝေပြီဗျာ ဒီလိုတောင်လိမ်နေကြပြီ
ဖုန်းနံပါတ် ဘယ်မှာပေးမိလဲ.. ရုတ်တရက်ဖုန်းမြည်လာသဖြင့် “မင်္ဂလာပါ” ကျွန်တော် ဖုန်းပြန်ထူးလိုက်သည်။ “ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ကဆက်နေတာပါ အစ်ကို့ဖုန်းက ၀၉၄၀၀၄၄၀၄၂၈ လား” ”ဟုတ်ပါတယ် ဘာလို့ပါလဲ” “အစ်ကို့အတွက်နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ကြေးရပါတယ်အစ်ကို” “ဗျာ . . ဟုတ်လား ဘယ်လို ဘယ်လို” ကျွန်တော် အံ့သြမင်သက်မိသွား၏။ ” …